I-Sun Yat-Sen Biography - UYise wesizwe
UYise woLuntu waseChina
I-Sun Yat-Sen (1866-1925) ibambe isikhundla esikhethekileyo kwihlabathi elithetha isiTshayina namhlanje. Nguye kuphela umzekelo ukusuka kwixesha lokuqala lokuguquguquka ohlonishwayo ngokuthi "uYise wesizwe" ngabantu baseRiphabhliki Yabantu baseChina , kunye neRiphabhulikhi yaseChina ( eTaiwan ).
Wenza njani i-Sun le feat? Iyiphi ifa lakhe kwiminyaka ye-21 ye-East Asia?
Ubomi bokuqala be-Sun Yat-sen
I-Sun Yat-sen yazalwa kwidolophana yaseCuiheng, e-Guangzhou, kwiPhondo le-Guangdong ngoNovemba 12, 1866.
Ezinye iimithombo zithi uzalwe e-Honolulu, eHawaii endaweni yoko, kodwa mhlawumbi oku kuxoka. Wafumana iSatifikethi sokuzalwa kowaseHawaii ngo-1904 ukuze ahambe e-US naphezu kwe- Chinese Exclusion Act ka-1882, kodwa wayeseneminyaka emine ubudala xa eqala ukungena eMelika.
I-Sun Yat-sen yaqala isikolo e-China ngo-1876 kodwa yadlulela e-Honolulu iminyaka emithathu kamva eneminyaka eyi-13. Wahlala kunye nomntakwabo, uSay Mei, kwaye wafunda kwiSikolo se-Iolani. U-Sun Yat-sen waphumelela kwisikolo esiphakamileyo sase-Iolani ngo-1882, wachitha i-semester enye e-Oahu College, ngaphambi kokuba umntakwabo omkhulu ambuyisele e-China eneminyaka eyi-17 ubudala. USay Mei wayeyika ukuba umntakwabo omncinci uya kuguqula ubuKristu ukuba Wahlala ixesha elide eHawaii.
UbuKristu kunye neNguquko
I-Sun Yat-sen yayisele ifumene iingcinga ezininzi zobuKristu, nangona kunjalo. Ngomnyaka we-1883, yena kunye nomhlobo waqhekeza umfanekiso we-Beiji-umfanekiso kaThixo phambi kwetempile yedolophana yasemzini waza wabalekela eHong Kong .
Ngaloo, ilanga lafumana idigri yezokwelapha evela kwiKholeji yaseMongeni yaseHong Kong (ngoku iYunivesithi yaseHong Kong). Ngethuba lakhe eHong Kong , loo mfana waguqukela ebuKristwini, kwintsapho yakhe.
Kwi-Sun Yat-sen, ukuba ngumKristu yayisisimboli sokuvuma kwakhe "namhlanje," okanye kwiNtshona, ulwazi kunye neengcamango.
Kwakuyimpendulo yenguqu kwixesha apho i- Qing Dynasty izama ngokukhawuleza ukuba iguqulwe kwintshona.
Ngomnyaka we-1891, ilanga laye layeka ukwelashwa kwakhe kwaye lasebenza kunye neFuren Literary Society, elalikhuthaza ukuchithwa kweQing. Wabuyela eHawaii ngowe-1894 ukuze afune abazalwana baseTshayina beza kubangela isizathu sokuguqula, egameni likaRubvive China Society.
I-1894-95 IMfazwe yaseSino-yaseJapane yayinokutshatyalaliswa kabuhlungu ku rhu lumente waseKing, ukondla kwiifowuni zokulungiswa. Abanye abaguquleli bafuna ukuqhutyelwa phambili kwexesha laseKinshasa ngokuqhubekayo, kodwa i-Sun Yat-sen yabiza ukuphela kolawulo kunye nokusekwa kwiphablikhi yanamhlanje. Ngo-Oktobha ka-1895, iNguqulelo yoMbutho weChina yenze uvuko lokuQala lwaseTuongzhou ngenzame yokuphanga iQing; izicwangciso zabo zavela, kwaye urhulumente wabamba amalungu angama-70 oluntu. U-Sun Yat-sen wasinda ekuthunjweni eJapan .
Ngethuba lokuthunjwa kwakhe eJapan nakwezinye iindawo, i-Sun Yat-sen yenza oonxibelelwano kunye ne-Japanese modernizers kunye nabameli be-pan-Asian ngokumelene ne-Western imperialism. Kwakhona wancedisa ukunikezela izixhobo kwiNqaba yePhilippines , eyayilwa ngendlela yayo ngaphandle kwe-sperial yaseSpeyin kuphela yokuba iRiphablikhi entsha yasePhilippines yachithwa ngabantu baseMerika ngo-1902.
Ilanga lase lithemba ukusebenzisa iiPhilippines njengesiseko seenguqulelo zesiTshayina kodwa kwafuneka ilahle eso sicwangciso.
Ukusuka eJapane, uSanga kwakhona waqalisa isibini ukuzama ukuvukela urhulumente waseTindong. Nangona uncedo oluvela kwi-triads yolwaphulo-mthetho, loo-Oktobha 22, 1900, u-Huizhou Uprising naye waphumelela.
Kwimizuzu yokuqala yokuqala yekhulu lama-20, i-Sun Yat-sen yabiza iChina ukuba "ixoshe abemi baseTatar " -kuthetha ukuba ubuhlanga - iManchu Qing Dynasty - ngelixa iqokelela inkxaso evela kwiiShayina phesheya e-US, eMalaysia naseSingapore . Waqalisa ezinye ezisixhenxe ukuzama ukuvukela, kuquka ukuhlasela kwe-China ephuma eVietnam ngoDisemba ka-1907, obizwa ngokuba yi-Zhennanguan Uprising. Umzamo wakhe obalaseleyo wokwenza umhla, uZhennanguan wagqiba ekuphumeleleni emva kweentsuku ezisixhenxe zokulwa krakra.
I-Sun Yat-sen yayise-United States xa i-Xinhai Revolution yaqhambuka eWuchang ngo-Oktobha, ngo-10, 1911.
Ukukhunjulwa, uSanga waphoswa ukuvukela okwehlisa umlawuli wamantombazana , u- Puyi , waza wagqiba umbuso wamaTshayina. Ngokukhawuleza xa evile ukuba i- Qing Dynasty yawa , ilanga labuyela eChina.
Ibhunga leendwendwe ezivela kumaphondo ngoDisemba 29, 1911 lanyula i-Sun Yat-sen ukuba libe "ngumongameli wesikhashana" weRiphabhlikhi entsha yaseChina. Ilanga lakhethwa ngokuqwalaselwa komsebenzi wakhe wokunyusa ukuxhaswa kwemali kunye nokuxhaswa kwemibhikisho kwiminyaka elishumi edlulileyo. Nangona kunjalo, i-warlord yaseNyakatho uYuan Shi-kai wayethembise uongameli ukuba unokunyanzelisa uPiyi ukuba alahlekise itrone.
U-Puyi wagxeka ngoFebruwari 12, 1912, ngoko ngoMatshi 10, i-Sun Yat-sen yahamba eceleni kwaye uYuan Shi-kai waba ngumongameli wexesha elilandelayo. Ngokukhawuleza kwacaca ukuba i Yuan inethemba lokuseka ubukumkani obutsha bombuso, kunokuba i-republic republic. Ilanga laqala ukubambisana nabalandeli bakhe, bebizela kwindibano yezomthetho eBeijing ngoMeyi ka-1912. Ibandla lahlukana ngokulinganayo phakathi kwabasekeli be-Sun Yat-sen no-Yuan Shi-kai.
Kwindibano, umlingani we-Sun Ingoma uJiao-ren yabiza iqela labo iGuomindang (KMT). I-KMT ithathe izikhundla ezininzi zomthetho okhethweni, kodwa ininzi; bekuyi-269/596 kwindlu ephantsi, kunye ne-123/274 kwi-senate. U-Yuan Shi-kai wayala ukubulawa kweNkokheli ye-KMT ingoma yeJiao-ren ngo-Matshi ka-1913. Ayikwazi ukuphumelela kwibhokisi yokuvota, kunye noyiko lukaJuan Shi-kai olukhuni, ngoJulayi ka-1913, ilanga lahlela i-KMT Umkhosi ka Yuan.
Nangona kunjalo, i-Yuan yama-80,000 imikhosi inamandla, kwaye uSat Yat-sen waphinde wabaleka ekuthinjweni eJapan.
Ngo-1915, u-Yuan Shi-kai waqaphela ngokukhawuleza iinjongo zakhe xa wayezibiza ngokuba nguMbusi waseChina (u-1915-16). Isibhengezo sakhe sabangela ukunyanzeliswa kwamabutho emfazwe, njengeBha Lang, kunye nokuphendula kwezopolitiko kwi-KMT. I-Sun Yat-sen kunye ne-KMT balwa "umbusi" omtsha kwiMfazwe ye-Anti-Monarchy War, njengoko iBang Lang iholele i-Bai Lang Ukuvukela, ichukumisa kwi-Warlord Era yaseChina. Kwiingxabano ezalandela, inkcaso enye yachaza uSol Yat-sen no-Xu Shi-chang njengoMongameli weRiphabhlikhi yaseChina.
Ukunyusa amathuba okwehla kwe-Yuan Shi-kai, i-Sun Yat-sen, ifikelele kumakhomanisi asekuhlaleni nakwamanye amazwe. Wabhala kwi-Second Communist International (iCommintern) eParis ukuze axhaswe, kwaye waya kwiCawa yamaKhomanisi eChina (CPC). Umkhokheli waseSoviet uVladimir Lenin udumisa uSuku ngomsebenzi wakhe waza wathumela abacebisi ukuba bancede ukuseka i-academy. Ilanga lamiselwa igosa elincinci elithi Chiang Kai-shek njengomlawuli weNational Revolutionary Army kunye nesikolo sayo sokuqeqeshwa. I-Whampoa Academy yavulwa ngokusemthethweni ngoMeyi 1, 1924.
Ukulungiselela iNkampu yoMntla
Nangona uChiang Kai-shek engathembekanga ngokusebenzisana nama-communist, wahamba kunye nomcebisi wakhe we-Sun Yat-sen. Ngoo-Soviet aid, baqeqesha umkhosi wama-250,000, owawuza kuhamba ngentlabathi ye-China ehlaselwa emithathu, ejolise ekupheliseni iinqwelo zeemfazwe uSun Chuan-fang ngasentla-mpuma-mpuma, iWu Pei-fu e-Central Plains, kunye noZhang Zuo -yayiseManchuria.
Olu phulo olukhulu lwempi lwaluza kwenzeka phakathi kowe-1926 no-1928, kodwa lwaluya kuvelisa amandla phakathi kwabalindi beemfazwe kunokuba kuhlanganiswe amandla emva koRhulumente kaZwelonke. Isiphumo esidelele kunokuba sisisigxina se-Generalissimo Chiang Kai-shek. Nangona kunjalo, i-Sun Yat-sen ayiyi kuphila ukuze ibone.
Ukufa kweLanga Yat-Sen
Ngomhla ka-12 kuMatshi ngo-1925, uSay Yat-sen wasweleka kwi-Peking Union College College kwi-cancer yesibindi. Wayeneminyaka nje engama-58 ubudala. Nangona wayengumKristu obhaptiziweyo, wangcwatywa kuqala kwindawo yaseBuddhist kufuphi neBeijing, ebizwa ngokuba yiThe Temple of Azure Clouds.
Ngomqondo othile, ukufa kwelanga kwangaphambili kwaqinisekisa ukuba ifa lakhe lihlala kwilizwe laseChina naseTaiwan. Ngenxa yokuba waqokelela i-KMT kaZwelonke kunye neCommunist CPC, kwaye babesabambisana ngexesha lokufa kwakhe, zombini amacala adumisa inkumbulo yakhe.
Iimfazwe zasePheresiya - iMfazwe yasePlataea
Julius Caesar Umfanekiso
Ngubani olawula ixesha elide kunabo bonke abaseBritani?
6 Amanqaku Okumazi NgoKumkanikazi waseVictoria
Iprofayili yeSpanish uFrancisco Franco
Abalawuli baseFransi: Ukususela ngo-840 ukuya ku-2017
I-Biography ye-Qin Shi Huang: uMlawuli wokuqala weChina
I-Qing Dynasty Emperors yaseChina
Ukubhukuda Izifundo Zobunzima -Bababini - Ukufundisa UkuShukuma Izifundo Eziya Kuminyaka Elidala Abadala
Amazwe "amatsha" kunye "namaDala"
UWilliam Howard Taft Biography: UMongameli we-27 we-United States
Umzamo ochanekileyo kwiBuddha
I-Rigger Brush Tips ezivela kumculi uTina Jones
Indlela yokudibanisa "Allmer" (kuKhanya)
I-Taurus nePisces Uthando olufanelekileyo
I-Force Awakens: Iingxelo ezili-10 ezingekho kwi-Movie
I-University of Truman University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Loblolly Pine, Umthi obalulekileyo eMntla Melika
Fumana Indlela Yokufumana Umlenze Ngomncintiswano kwiBhola leFantastic Ibhola
Yintoni ebangela i-Déjà Vu?
Ukuhlaziywa ngokupheleleyo kwe-Honda ye-Silver Wing Power Scooter
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: i-karyo- okanye i-caryo-
I-Blue Moon ichazwe
Indlela yokubhala i-4 yeBakala Biography
21 Iimfono zeefilimu zokuHlala eziHle
Ziziphi iimpawu zokuba lilungu leSenate yamaRoma?
I-Railways kwi-Industrial Revolution
Imbali yabasetyhini abagijima kuMongameli we-United States
Indlela yokufakela i-Skirt kwi-Kayak
Iphrofayli kunye ne-Biography kaFilipu umpostile, umfundi kaYesu
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -penia